Isivivinyo Samahhala se-NordVPN 2020 - Izinsuku ezingama-30 Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Imali - Izipesheli
Ngabe ulangazelela ukuthola izandla zakho ku-NordVPN mahhala? Ungakwenza, inyanga yonke. Sizokufundisa indlela esemthethweni yokuthola i-NordVPN mahhala inyanga. landela umhlahlandlela wethu wesinyathelo ngesinyathelo, futhi ngeke ube khona ngokushesha.
Ingabe i-NordVPN inikezela Ngempela Isivivinyo Samahhala?
Ngokobuchwepheshe, YEBO. Yize udinga ukukhokha ngaphambi kokuthola ukufinyelela kwinsizakalo yabo ye-premium, bafuna isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30. Ngakho-ke, lapho uthenga futhi ukhansela ukuthenga kungakapheli izinsuku ezingama-30 uqale, uzobuyiselwa imali yakho ephelele.
Yilokho esizokufundisa kulo mhlahlandlela. Ngakho-ke ngaphandle kokulibala, ake singene kuwo.
Ufuna ezinye iziphesheli ze-VPN? Hlola Isivivinyo samahhala se-ExpressVPN esinikezwa nge-30 Days Money Back Offer
Izinyathelo Zokufuna Isivivinyo Samahhala se-NordVPN:
Senze lesi sinyathelo saba lula kuwe. Vele uchofoze lapha , futhi uzoyiswa ngqo kuwebhusayithi esemthethweni yeNordVPN.
Uma usukuwebhusayithi yabo. Uzothola u-‘Thola iNornVPN'Inketho ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini. Chofoza kuso bese uqala inqubo yakho yokufuna.
Manje, sekuyisikhathi sokukhetha ukuthi yiluphi uhlelo ofuna ukulithenga. Njengoba inhloso kuphela yalo mhlahlandlela ukuthola isivivinyo samahhala, sincoma ukuthi uthole uhlelo lwenyanga engu-1 ngoba kuzofanele utshale imali encane izinsuku ezingama-30 kulolo hlelo oluthile.
Uma usukhethe uhlelo, skrolela phansi. Uzobona inkinobho enemibala eluhlaza okwesibhakabhaka ithi ‘Qhubeka ukhokhe ', shaya leyo nkinobho bese uyiswa esikrinini esilandelayo. Lapha, kuzofanele ufake imininingwane yakho yangasese neyokukhokha. Gcwalisa imininingwane kahle bese ushaya u-'Qhubeka '.
Uzothola i-imeyili evela kwaNordVPN mayelana nemininingwane ye-akhawunti yakho osanda kuyakha. Kuzofanele wenze i-akhawunti yakho isebenze lapho. Kuzoba nenkinobho enemibala eluhlaza okwesibhakabhaka ethi 'Setha iphasiwedi bese wenza kusebenze i-akhawunti'. Chofoza kuso.
Uzothola ibhokisi lezingxoxo mayelana nokusetha iphasiwedi entsha ye-akhawunti yakho ye-NordVPN. Setha iphasiwedi oyifunayo bese uqhafaza ku-'Guqula Iphasiwedi. '
Ngemuva kokuthi usethe ngempumelelo iphasiwedi yakho. Uzoyiswa esigabeni sokulanda. Kufanele ulande i-VPN kusuka lapho, futhi seyenziwe.
Halala! Usukulungele ukusebenzisa izici ze-premium ze-NordVPN.
Ungasikhansela Kanjani Isivivinyo Samahhala se-NordVPN?
Ungathanda ukubuyiselwa imali yakho, akunjalo? Uyithola kanjani? Qiniseka, sizokutshela ukuthi uzosifaka kanjani isicelo sokubuyiselwa imali ngaphambi kwezinsuku ezingama-30 ukuze lokhu kube yisivivinyo samahhala kuwe.
Iya kuwebhusayithi esemthethweni yeNordVPN. Chofoza lapha ukufika lapho ngokushesha.
Uma usuvele ungene ngemvume, kuhle futhi uma ungekho, bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho. Uzobona inketho yokungena ngemvume ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini. Uma uchofoza kuyo, enye ithebhu izovuleka ngesikrini sokungena ngemvume. Faka izifakazelo zakho ze-NordVPN bese ungena ku-akhawunti yakho.
Uma usungaphakathi kwe-akhawunti yakho ye-NordVPN, kuzofanele uthole ibhokisi lokuxoxa elizokuxhumanisa nokwesekwa kwamakhasimende. Leli bhokisi lengxoxo lizoba khona ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini. Kuzoba umbuthano onombala ompunga onophawu lombuzo ngaphakathi.
Ngemuva kokuchofoza ebhokisini lengxoxo, ingxoxo ye-NordVPN izoqala ingxoxo. Vele uthayiphe lapho ofuna ukukhuluma nokusekelwa kwamakhasimende. I-chatbot izokubuza imibuzo maqondana nokuthi ufuna ukukhuluma ini ekusekelweni kwamakhasimende. Itshele ukuthi imayelana nokukhokha. Ngemuva kwalokho, izokucela i-imeyili yakho ye-imeyili. Faka i-id yakho yeposi bese ushaya u-send. Ekugcineni, uzoxhumana ne-ejenti yabantu baseNordVPN.
Mane ubatshele ukuthi ufisa ukukhansela okubhalisile futhi ufuna ukubuyiselwa imali ngemuva kwemibuzo nezimpendulo ezimbalwa ezisemthethweni. Ukwesekwa kwamakhasimende kuzokhansela okubhalisele futhi kukhokhele ukubuyiselwa kwakho kwemali endleleni yakho yokuqala yokukhokha.
Yilokho ngakho. Kufanele uthole imbuyiselo ephelele zingakapheli izinsuku eziyi-5-7 zokusebenza.
Yini ongayilindela kunguqulo Yesivivinyo Samahhala se-NordVPN?
Njengoba ukhokhele insizakalo ye-premium, uvule zonke izici uNordVPN okufanele anikele ngazo.Nasi ukubuka konke kwezinye izici ezinhle uNordVPN okufanele anikele ngazo ngesikhathi sesivivinyo samahhala.
Uzoba nenkululeko yokukhetha kusuka kumaseva angaphezu kwama-5400 atholakala emazweni angama-59.
Jabulela amakhulukhulu wamaseva we-P2P akuvumela ukuthi wabelane ngamafayela amakhulu ngokuphepha okuphelele.
Ukuxhumeka kwakho kuvikelekile ngemuva kokubethela okuhle kakhulu ekilasini okunikezwa yi-NordVPN
Azikho izingodo ezigcinwayo zomsebenzi wakho. Njengoba zingekho izingodo, akekho owaziyo ukuthi ubukade wenzani ku-inthanethi. Ubumfihlo bakho buphelele.
Xhuma kuze kufike kumadivayisi we-6 kunethiwekhi yommeleli. Akunasidingo sokuthi amadivayisi abe wohlobo olufanayo. Ungaxhuma noma yimaphi amadivayisi we-6.
Vimba i-malware eyingozi nezikhangiso.
Izilingo Zamahhala ze-VPN vs Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Imali:
Izilingo zamahhala nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali akufani. Ake sichaze.Enguqulweni yesilingo samahhala, uthola ukufinyelela kuzici ze-premium, kepha nakhu ukubamba. Akuzona zonke izinsizakalo ze-premium ezifakiwe esivivinyweni samahhala; ezinye zazo zigcinelwe amakhasimende we-premium akhokha empeleni ukusebenzisa insiza.
Yize kungezona zonke izici ezitholakalayo, ezitholakalayo nazo zikhawulelwe ukusetshenziswa. Isb. noma uthola ukufinyelela kuseva etholakala kuphela kumsebenzisi we-premium, awukwazi ukweqa umkhawulo othile wejubane obekiwe, noma kwezinye izimo, awukwazi ukusebenzisa leyo seva ngemuva kwemizuzu eyi-10.
Izilingo zamahhala nazo zinikezwa isikhathi esincane kakhulu.Manje ake sikhulume ngezinhlelo zokuqinisekisa ukubuyiselwa kwemali. Esikwenzayo ezinhlelweni zokubuyisa imali ukuthi sikhokha kusengaphambili sisebenzisa insiza, ngakho-ke njengoba sikhokhela ukusebenzisa isevisi, sithola zonke izici ze-premium ngaphandle kwanoma yimuphi umkhawulo. Yize sizokhansela okubhaliselwe kwethu ngaphambi kwezinsuku ezingama-30 ukuze sikwazi ukuthola imbuyiselo, akunandaba.
INordVPN inikeza inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali yezinsuku ezingama-30. Kuphephile ukuyifinyelela. Bangomunye wabahlinzeki benethiwekhi yama-proxy abahamba phambili emhlabeni jikelele. Ayikho imigomo nemibandela efihliwe, futhi imali yakho iphephile. Vele uqiniseke ukuthi ucela ukubuyiselwa imali ngaphambi komaki wezinsuku ezingama-30.
Izinhlelo Zamanani eNordVPN:
INordVPN inikeza izinhlelo ezintathu. Uhlelo lwenyanga eyodwa, uhlelo lonyaka, kanye nohlelo lweminyaka emibili.
uhlelo lwenyanga eyodwa:Ikhokha u- $ 11.95 (₹ 883)
Uhlelo Lonyaka:Ikhokha u- $ 4.92 (₹ 364) ngenyanga.
Uhlelo Lonyaka Lombhangqwana:Ikhokha u- $ 3.71 (₹ @ 274) ngenyanga.
Zonke izinhlelo ezinikezwa yiNordVPN ziza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30.
Kuthiwani ngemuva kokuphela kwesivivinyo samahhala se-NordVPN?
Ngemuva kokuqeda isikhathi sakho sesivivinyo samahhala, awukwazi ukukuthola kabusha. Udinga ukuthenga eyodwa yezinhlelo zabo ezintathu bese kuphela ungasebenzisa i-NordVPN.Sincoma ngokuqinile ukuthi wenze ukuthenga okusemthethweni futhi ungayi kuzinhlelo zokusebenza ezi-modded. Lokhu kungaqukatha amagciwane ayingozi ne-malware engabeka idatha yakho engcupheni enkulu.
Imibuzo ejwayelekile ukubuzwa:
1Q. Mangaki amadivayisi angasetshenziswa nge-NordVPN ngasikhathi?
Iminyaka:Ungaxhuma kuze kufike kumadivayisi we-6 ngesikhathi esithile kunethiwekhi yommeleli. Futhi uma ufisa ukuxhuma amadivayisi angaphezu kweyodwa kuseva efanayo, udinga nje ukukhetha iphrothokholi ehlukile ye-VPN yenye idivayisi.
2. Yiziphi izindlela zokukhokha ezamukelwa yiNordVPN?
Iminyaka:INordVPN yamukela zonke izinhlobo zamakhadi wesikweletu, i-Paypal, i-AmazonPay. Ungakhokha futhi ngeGooglePay nange-iTunes. Bemukela namakhadi ambalwa akhokhelwa kusengaphambili. Ungenza futhi ukuthenga kusuka esitolo esebenzisana nayo. Lapha uhlu lwalezo zitolo.
3Q. Ngingakwazi ukuthuthukisa uhlelo lwami ngemuva kwenyanga engu-1?
Iminyaka:Yebo, udinga nje ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho bese uqhafaza ku-‘Izinsiza Zami ’bese uchofoza ku-‘Shintsha uHlelo’ bese ungakhetha futhi uthuthukele kunoma yiluphi uhlelo oluthandayo.
4Q. Yini okufanele uyenze uma ngingatholi i-imeyili yokwenza kusebenze?
Iminyaka:Linda imizuzu engu-5-10 ukuze i-imeyili ifike. Hlola wonke amafolda ku-imeyili yakho. Kungaba kungenzeka ukuthi i-imeyili yokwenza kusebenze imakwe njengogaxekile noma i-imeyili yokuphromotha. Futhi, hlola ifolda engenamsoco.
Siphetha ngokuthi ukugenca kwamahhala kuyasebenza ngempela futhi kuyindlela esemthethweni yokufinyelela kuzo zonke izici ze-premium ezinikezwa yiNordVPN. Kuyinqubo eqondile, futhi nangesiqondisi sethu sezinyathelo ngezinyathelo, ngisho nomuntu ongayithandi imfuno angafuna isilingo samahhala.
INordVPN ingomunye wabahlinzeki benethiwekhi yama-proxy abahola phambili, futhi insizakalo yayo kufanele uyithole uma ufuna ukuhlala uphephile futhi uvikelekile kulomhlaba oku-inthanethi.
Buka iNetflix usebenzisa i-ExpressVPN
I-VPN ehamba phambili yeDisney Plus (2020)
Ungayidlala kanjani iRoblox kuChannelbook?
I-iPhone 12 vs Mini vs Pro ne-Pro Max - amamodeli ama-4 aqhathaniswa
Ungayisetha Kanjani i-Amazon FireStick?
Ungayisebenzisa Kanjani iDiscord ku-Xbox One?
Ungasithola Kanjani Isaphulelo Somfundi weXfinity?
Ungayibuka Kanjani iNetflix usebenzisa i-ExpressVPN?
I-Roblox FPS Unlockers - Ingabe Ivumelekile Ukuyisebenzisa?
Ungayisebenzisa kanjani i-Hulu kunoma iyiphi idivayisi?
I-Netflix vs Hulu - Impi Yokuqhathanisa
Ungayilanda Kanjani Ividiyo ye-Instagram?
Izindlela ezi-5 ezihamba phambili ze-iMovie zeWindows 10
ungakuthola kanjani mahhala ku-roblox
umculo wamahhala uvulelwe isikole
izingosi zokusakaza zamahhala eziphezulu zamahhala zango-2017
ulithola kanjani ikhadi lesipho mahhala
iyiphi indawo engingabuka kuyo ama-movie wamahhala online